Xadgudub ka dhacay Koonfur Afrika | KEYDMEDIA ONLINE
Xadgudub ka dhacay Koonfur Afrika
keydmedia(koonfur-afrika)Iyadoo lagu jiro bisha barakeysan ee rabadaan ayaa hadana haben waliba waxaa dhibaato loogu geystaa Dalka Southafrica somali farabadan, xadgudubyada ayaa inta badan kadhaca tuuloyinka ka fog fog magalada habeen ka hor ayaa waxaa la weraray tukaan ay lahaayen somalida oo kuyaala tuulo lagu magacaabo filibis taasoo qiyaastii u jirta maglada cepeton 85 km.
Dukaanka la weeraray ayaa waxyeelo dhaawac ah wax ay ka gaartay Wiil Soomaali ah oo lagu magacaabo Abshir Cumar Bandaas, “Afar xabadood ayaa dhanka caloosha iyo feeraha iiga dhacday, iminkana waxaan dareeayaa xaalad aad u daran” ayuu yiri Mr Bandaas oo aan la kulmay.
.Isbuucan bilowgiisii ayeey aheyd markii gobalka Baal ee Koonfurta Dalkaasi lagu dilay afar qof oo Soomaali ah iyagoo ku sugan Dukaan weerarkaani ayaa dhacay xili habeen ah .
Ciidamada Booliska koonfur Afrika oo iyaga u muuqda kuwa taageersan falalka isir naceybka ku dhisan ee Soomaalida lagula kaco ayaanan isku dayin in ay wax tilaabo ah oo lagu daryeelayo Soomaalida in ay qaadaan.
C/xakiin Ibraahim Cawaale
Waxaa weli xiran isha dhaqaalaha ee maamulka Galmudug taas oo ah waddada isku xirta koofurta bartamaha iyo waqooyiga Soomaaliya, taasoo maamulku uu ka qaadan jiray lacago canshuur ah